Dagaalada Blob: Mid ka mid ah ciyaaraha aan ugu jeclahay GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Dagaalada Blob: Mid ka mid ah ciyaaraha aan ugu jeclahay GNU / Linux
In kasta oo aanan ahayn "gamer" waswaas ah, haddana marba marka ka dambaysa waxaa igu mashquuliya ciyaarta aan fiicnayn ee kuwa aan u baahnayn dalabyo badan marka la eego kakanaanta shaxdeeda, maxaa yeelay si la yaab leh, iyagu waa kuwa inta badan igu maaweeliya.
Dagaalada Blob waa ciyaar inbadan ixasuusinaysa Super Contra maxaa abuuri doona Konami ee 80-meeyadii, taas oo halkii aan meel walba kaga toogan lahaa nin, markan aan ku sameeyo a Smile ka imanaya meeraha ah Caleemaha ????
Sheekadu waxay u dhacaysaa sidan soo socota: Blobs-ka waxay ku wada noolaayeen wada noolaansho iyo nabad dhulkooda ilaa ay ku soo duuleen shisheeyaha oo ay hogaaminayeen dhoola cadeyn macdan ah oo la yiraahdo Galdov, oo aan kaliya burburin wax walba, laakiin sidoo kale afduubay qaar ANIGAA ISKA LEH (gabdhaha sheekada kujira). Bob (soojiidashada) dhoola jilaa) waa askari ka tirsan Ciidanka Blob, yaa ku qasbaya inuu sii daayo walaalihiis dagaalka.
Tan awgeed, wuxuu heystaa hub kala duwan, oo uu helo markuu tirtiro cadaawayaashiisa isla markaana ciyaarta, wuxuu helaa qalab gaar ah sida: Taangiga oksijiinta si looga fogaado qarqinta iyo a JetPack Si aad udoosho.
Sheekada ciyaartan ma ahan mid toosan. Markaan garaacno heerarka, ujeeddooyinka cusub ayaa ka muuqda khariiddada mararka qaarkoodna, waa inaan dib ugu laabanno si aan u dhammaystirno howlaha naloo diray. In kasta oo aanu lahayn sawiro casri ah, ciyaarta waxay ka kooban tahay ficillo badan iyo dhimasho rabshad leh 😀
Cayaartu waxay ku jirtaa inta badan bakhaarrada dhammaan qaybinta, markaa waa inaan kaliya ku rakibnaa iyadoo la adeegsanayo aaladaha caadiga ah ee mid kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Dagaalada Blob: Mid ka mid ah ciyaaraha aan ugu jeclahay GNU / Linux
Taasi Birta Adag ayaa la badbaadin lahaa maxaa yeelay haddii aan Blob ku beddelno Gear ...
Waxay umuuqataa il birqaran oo aad ufiican aniga.
Aad ufiican ciyaartaas, rambo dhan.
😀 weyn waan tijaabinayaa.
Waxay umuuqataa mid xiiso leh, sidoo kale waxaan dhadhaminayaa ciyaaro leh shaxano yar dhawaanahan (Quadrapassel waa xD kuxigeen)
Qorfaha waxaa laga heli karaa PPA oo loogu talagalay Ubuntu
Mandriva waxay qarka u saaran tahay musalifnimo